दमक : झापाको दमक-५ की खेमकुमारी ओलीको दैनिकीमा केही समययता परिवर्तन आएको छ। अरुवेला सधैं घरमै हुने उनी अचेल दिन भरि स्यानीटरी प्याड उत्पादन गर्छिन्। केही समयको तालिम पछि उनी अन्य एकल महिलाहरूसँगै मिलेर यसको व्यावसायिक उत्पादनमा लागेकी हुन्। उत्पादन गरेपछि...
दमक : झापा कमल–३ का सरकार सोरेन स्थानीय सन्थाल वस्तीका अगुवा। उनको नाम मात्र सरकार होइन, जोगीचौन गाउँको एउटा सन्थाल वस्तीमा उनकै नेतृत्वको सरकार चल्छ। उनी टोलका प्रमुख हुन्। सन्थाल वस्तीमा माझीहडाम अर्थात् टोल प्रमुखकै नेतृत्वमा स्थानीय निर्णयहरू हुन्छन्। अघिल्ला ...
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नजिकिएसँगै बिभिन्न तहका सरकारसँगै निजी क्षेत्र समेत यसको तयारीमा जुटेको छ। बिभिन्न पर्यटकीय सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन अहिले प्राथमिकतामा जुटेका छन्। मेची अञ्चलका पर्यटन व्यवसायीसमेत अहिले यही क्रममा लागेका छन्। उनीहरूले मेची पर्यटन करि...
दमक : चार/पाँच वर्ष अघिसम्म नवरथासँगै रातभरि गाउँमा बज्ने ढोलले संकेत गर्थ्यो, दशैं आएको। सन्थाल बस्ती गुञ्जयमान हुन्थे। झापा र मोरङका आदिबासी सन्थालहरू विभिन्न स्थानमा लाग्ने हाट र मेलामा आफ्नो नाच देखाउन तयारी गर्थे। तर, अहिले अवस्था यस्तै छैन। झापाको लखनपुर,...
दमक : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बामपन्थी सरकार गठन पछि विपन्न नागरिकको जीवनमा परिवर्तन शुरु भएको बताएका छन्। उनको आफ्नो गृह क्षेत्र झापा क्षेत्र नं. ५ को दमकमा सोमबार आयोजित शुभकामना आदन प्रदान कार्यक्रममा उनले हुने खानेहरूको भन्दा पनि हुँदा खानेहरूको जीवनमा परिवर्...
दमक : दशैंको नौरथा आइसक्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा समेत लिङ्गे पिङ देखिएका छैनन्। पिङ हाल्न चाहिने सनपाट (पाटा), त्यसलाई तयार पार्ने युवा शक्ति समेत पाइन छोडेपछि पिङविहीन दशैं मनाउनु परेको हो। दशैंको नवरथा शुरु हुनु अगावैदेखि गाउँमा लिङ्गे पिङ हाल्ने चलन थिय...
दशैंको आडमा मेला र खेला
दमक : दशैं, तिहार तथा छठ लगायतका मुख्य पर्व नजकिएसँगै विभिन्न नाम र बहानामा मेला–महोत्सवको समय पनि शुरु भएको छ। विभिन्न व्यावसायिक तथा सामाजिक संघ संस्थाले सांस्कृतिक प्रवर्द्धन तथा सहयोग संकलनको उद्देश्य राख्दै यस्ता मेला आयोजना गर्ने गरेका छन्। प्रशासनमा...
दमकमा बढ्दो होटलमा लगानी, लक्ष्य तारे होटल
दमक (झापा) : पछिल्ला वर्षहरुमा दमकमा व्यावसायिक चहलपहल बढेको छ। योसँगै जनघनत्वमा भएको वृद्धिलाई व्यवसायीहरुले लगानीको अवसरका रुपमा समेत लिन थालेका छन्। नयाँनयाँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु थपिने क्रमसँगै होटलहरुको संख्या समेत बढेको छ। स्थानीय ग्राहकहरुलाई लक्षित मझौल...
दमक : पर्यटन वर्ष २०२० संघारमा नै आई पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा पर्यटकीय योजनाहरूले तीव्रता पाएका छन्। यहाँ पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रियस्तरबाट दमक भ्युटावर, बुद्धको मूर्तिसहितको पार्कलगायतका योजना अघि सारिएको छ। यीबाहेक दमक नगरपालिकाले...
व्यवसायीमार्फत दलीय प्रतिष्ठाको परीक्षा
दमक : दमक उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शुक्रबार निर्वाचन भएको छ। चुनावका लागि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकल प्यानल र बाँकी दलको प्यानल अर्कातिर भएका कारण यसलाई दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनक...
ब्युटिपार्लरले आत्मनिर्भर बन्दै महिला, झापामा मात्रै ४ हजार स्वरोजगार
दमक (झापा) : छोटो समयको तालिम र सानो पुँजीले पनि स्वरोजगार बन्न सकिने पेशाको रुपमा स्थापित भएको सौन्दर्यकला व्यवसाय। ‘व्युटी पार्लर’ व्यवसायको रुपमा चिनिएको यस क्षेत्रमा झापामा मात्र ४ हजार महिला स्वरोजगार बनेका छन् भने २ हजार भन्दा बढी पार्...
राजनीतिक दलको प्रतिष्ठा बन्दै व्यवसायीको निर्वाचन
दमक : दमक उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकका राजनीतिक दल विभाजित बनेका छन्। यहाँ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एक्लै चुनावी मैदानमा छ भने बाँकी सबै दल अर्को प्यानलमा अटाएका छन्। शक्तिशाल...
सिटिइभिटी अघि लागेपछि नगरपालिका पछि हट्यो
झापा ( दमक) : जिल्लाको दमकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ले आंगिक प्राविधिक शिक्षालय संचालन गर्ने भएपछि नगरपालिका पछि हटेको छ। यसअघि नगरपालिकाले नै बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सिटिइभिटीले नै सोही प्रकृतिको आ...
दमक : हरेक वर्ष झै झापाको दमकमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट निकालिने रथयात्र यस वर्ष पनि निकालिएको छ। रथयात्रामा हजारौं भक्तजन सहभागी रहेका थिए। दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीले आरती गरेपछि श्रीकृष्ण रथयात्राको शुभारम्भ गरियो। रथायात्रा दमक–७ मा रह...
दमक : झापामा सादगी नेताको छवि बनाएका व्‍यक्तित्‍व हुन् तारासम योङ्या। झापाको राजनीतिमा स्थापित नाम हो यो। तत्कालीन नेकपा एमालेको अञ्चल कमिटी तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्यसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका उनीसँग प्रतिनिधिसभा सदस्यको अनुभव पनि छ। अझै उनी सम्झन्छ...
दमक : कमल गाउँपालिका–६ का सन्देश तिम्सिनाले कक्षा ५ सम्म बोर्डिङ स्कुल पढे। त्यसपछि भने उनी वडा नं. ५ मा रहेको मंगलमय माविमा भर्ना भए। बोर्डिङ स्कुलमा समेत प्रथम हुँदै पास भएका छोरालाई मंगलयमयमा पनि बोर्डिङ सरहकै पढाई हुने थाहापाएर भर्ना गरिदिएको आमा शोभा तिम्...
दमक : २०१८ साल माघमा पाँचथरको सिँबुवा पञ्चमीमा नर्वदा र धनपति खनालका एक छोरी र पाँच छोरा मध्येका कान्छा लक्ष्मीप्रसाद खनालको बाल्यकाल पहाडमै वित्यो। खेती किसानी परिवारमा जन्मिएका उनको बाल्यअवस्था वन-पाखा र दाउरा घाँसमै गुज्रियो। २०३० सालमा दमकको भालुखुँडीमा बस...
दमक : झापाको दमकमा खपत हुने खसी-बोका पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट आउने गरेका छन्। इलाम र पाँचथरका दक्षिणी क्षेत्रसँगै मोरङकाे पूर्वोत्तर क्षेत्रका खसी बाख्राको मुख्य बजार पनि दमक नै हो। यतिले पनि माग धान्न नसक्दा भारतबाट आयातीत खसी-बोकाले पनि यहाँको मासु खपत ...
सुकुमबासी खोज्छन् जग्गा, सरकार खोज्छ कानुन
| साउन २१, २०७६
दमक : स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको दुई वर्ष भयो। त्यस बेला सवै राजनीतिक दलहरुले दमक ४ को सुनौलो टोलका सुकुमबासीलाई जमिन र घरको बन्दोबस्ति मिलाई दिने आश्वासन दिएका थिए। त्यहि आश्वासन कार्यान्वयनको खोजी अहिले भीमिहीनले गर्न थालेका छन्। यही टोलमा शान्त...
बेतले जोड्यो मन, मनले जोड्यो देश
दमक : मायाको शक्ति कति हुन्छ भनेर भारत पश्चिम बंगालस्थित जलपाइगुडीका अमल राय र धनकुटा कुरेलीकी मेनुका ढुंगानाको जीवन हेरे पुग्छ। भाषा, संस्कृति, परिवार र देशलाई नै उछिनेर उनीहरूको प्रेमको जीत भएको छ। अमलले नेपाललाई कर्मथलो बनाएको तीन दशक हुन लाग्यो। किशोरावस्...